Axadii Ayuu Koob La Qaaday France, Talaadadana Xabsi Ayuu Galayaa - Gabadhaan Ayaana U Sabab Ah - Laacib
Axadii Ayuu Koob La Qaaday France, Talaadadana Xabsi Ayuu Galayaa – Gabadhaan Ayaana U Sabab Ah
October 13, 2021 Saed Mohamed
Lucas Hernandez oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa loo sheegay inay qasab tahay inuu xabsi galo ka dib markii uu jabiyay sharci maxkamadeed oo ka reebayay inuu ka agdhawaado xaaskiisa hore oo ay isku gacan qaadeen hadda ka hor.
Xiddiga Bayern Munich ayaa codsaday in la gakiyo xabsiga lixda bilood ee lagu xukumay.
Laakiin maanta waxaa soo baxday in maxkamadda Madrid ay diiday codsigiisa – waxayna siisay muddo 10 maalmood ah inuu si iskiis ah xabsiga ku soo galo laga bilaabo 11ka subaxnimo ee Talaadada soo socota.
Lucas, oo 25 jir ah, ayaa loo sheegi doonaa inuu dooran karo xabsiga Spain halkaas oo uu ku dhameysan karo xukunkiisa lixda bilood ah, marka uu hor tago maxkamada Madrid todobaadka soo socda.
Warka naxdinta leh ayaa imanaya saddex maalmood uun ka dib markii daafaca bidix, oo u ciyaari jiray Atletico Madrid, uu kula guuleystay Faransiiska finalkii UEFA Nations League markii ay 2-1 ku garaaceen Spain gool uu dhaliyay Kylian Mbappe oo soo daahay.
Ciyaaryahanka kubbadda cagta ayaa lagu xukumay xukun xabsi ah bishii Diseembar 2019 ka dib markii uu jebiyey amar maxkamadeed oo ka hor istaagayay inuu u dhowaado xaaskiisa hore Amelia Lorente.
Waxaa loo sheegay inuusan u jirsan karin gabadhaan in ka yar 500 mitir muddo lix bilood ah ka dib markii ay isku gacan qaadeen bishii Maarso 2017 markaasoo Hernandez lagu xukumay muddo 31 maalmood ah inuu qabto adeeg bulsho.
Laakiin Hernandez ayaa iska indhotiray amarka maxkamada, wuxuuna durbadiiba bilaabay inuu la heshiiyo Amelia iyagoo guur qarsoodi ah ku soo sameeyay magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka.
Markii ay ka soo laabteen bishoodii malabka Hernandez waxaa lagu xiray garoonka Madrid halka xaaskiisa Amelia aan la xirin madaama ay cadeysay inaysan ka warqabin go’aanka maxkamada.
Lucas Hernandez ayaa racfaan ka qaaday go’aanka maxkamada ee xabsiga lixda bilood laakiin waxaa loo sheegay inay qasab tahay inuu xabsi galo madaama aysan aheyn markii ugu horeysay ee uu sharciga ku xadgudbo.